Paragoay: Mampiely ny teny Guaraní amin’ny alalan’ny bilaogy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Avrily 2018 4:35 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Español, Italiano, 简体中文, 繁體中文, English
Any Paragoay, izay afaka ny 3% -n'ny mponina no afa-miditra aterineto ary 88%n'ny mponina no mampiasa ny fiteny indizeny Guaraní izay fitem-pirenena ofisialy ihany koa, nahita varavarana misokatra iray tsy mbola nisy niditra i Mirta Martínez, mpanao gazety sady mpampianatra Guaraní, izy no lasa bilaogera voalohany sady tokana manoratra amin'ny teny Guarani manerana izao tontolo izao, manintona ireo mpamaky tsy any Paragoay ihany fa manerana izao tontolo izao ihany koa.
Guaraní no fiteny iray nampiasain'ny vahoaka Guaraní tany am-boalohany, vondrom-piarahamonina tompotany monina any Paragoay, sy ny faritra sasany ao Arzantina, Brezila ary Bolivia. Na dia niparitaka teo amin'ireo firenena ireo aza ny Guaraní, be mpampiasa ao Paragoay, miaraka amin'ny teny Espaniôla (nentin'ny Espaniôla rehefa nanafika an'i Amerika Atsimo izy ireo) izy. Tena vitsy ankehitriny ny vahoaka tompotany Guaraní sisa tavela any Paragoay, saingy nandova ny fiteniny ny ankamaroan'ny olom-pirenena any Paragoay. Hatramin'ny taona vitsy lasa izay, noheverina fa fiteny ampiasan'ny “olom-pirenena saranga ambany” sy ny mponina avy any ambanivohitra ihany ny Guaraní. Vao tamin'ny taona 1992 nandritra ny fanavaozana ara-panabeazana izy no napetraka teny an-tsekoly fa tsy maintsy atao amin'ny fiteny Guaraní sy Espaniôla ny fampianarana.
Sarin'i Mirta Martínez
Fantatr'i Martinez fa mety ho fomba tsara hanapariahana ny fiteny Guaraní ny aterineto, ka dia nanolotra tetikasa ho an'ireo lehibeny ao amin'ny ABC Colour, gazety lehibe indrindra mivoaka manerany ny firenena izy mba hampiasa ny teny Guarani ao amin'ny tranonkalan'ny gazety sy hanoratra bilaogy amin'ny fiteny Guaraní, ary nekena izany. Androany, mifandray mivantana amin'i Martinez amin'ny alàlan'ny blaoginy ABC Rogue ireo olona manerana an'izao tontolo izao izay mankafy ity fiteny mahafinaritra ity.
Ity manaraka ity dia tafatafa niarahana tamin'ity mpanao gazety manana vina ity:
Global Voices: Ianao no olona voalohany nibilaogy amin'ny teny Guaraní…
Mirta Martínez: Eny, amin'ity taona ity no faha-folo taona nanoratako vaovao amin'ny teny Guaraní amin'ny endrika antseraseran'ny gazety, antsoina hoe Marandu (vaovao) ary hatramin'ny Oktobra 2008, manana ny blaogy voalohany sy tokana amin'ny teny Guaraní izahay. Maro ny lohahevitra noraketina tao amin'ny bilaogy, hahita lahatsoratra momba ny filohan'i Etazonia Barack Obama sy ny filohan'i Paragoay Fernando Lugo ianao, samy tampoka ho an'ny rehetra ny nahavoafidy azy mirahalahy ireo… miresaka momba ny olana ara-pahasalamana toy ny viriosy H1N1 ihany koa izahay. Ny lohahevitra rehetra izay nisy fiantrakany tamiko sy inoako fa mety mahaliana amin'ny ankapobeny.
Azoko lazaina anao fa nanao ny tranonkala ho toa azy manokana ireo mpamaky an'ity bilaogy ity.
Amin'ny maha-tantara fohy, nitsidika an'i Paragoay tamin'ny taona lasa teo i Oscar Uberti, mpamaky frantsay-Paragoayana, iray amin'ireo mpamaky mazoto indrindra ny blaogiko ABC Rogue. Injeniera misotro ronono izy ary tena liana amin'ny fiteny Guaraní, ka nanomboka nanoratra rakibolana Guaraní mifototra amin'ny voambolana ara-teknika fampiasan'ny injeniera. Noho izany dia nampiasa ny bilaogy izy mba hianatra sy hiresaka amin'ireo mpiteny Guaraní hafa any Frantsa.
GV: Satria miteny Guarani ny ankamaroan'ny mponina, nahoana ianao no mieritreritra fa iray ihany ny bilaogy amin'ny teny Guaraní?
MM: Voalohany indrindra dia tokony hisy fiofanana tsy tapaka ary ambonin'izany ny fitaovana teknolojiam-baovao izay mampivelatra sehatra vaovao ho fampielezana ny fiteny. Ankoatra izay, tokony hanana fahaiza-manao momba ny asa fanaovan-gazety sy ny fanabeazana ny fahafahana manoratra amin'ny gazety, ary tsy maintsy tianao izany. Ny asa amin'ny gazety dia mitaky fahafoizan-tena betsaka, satria mitaky fotoana be dia be ary tsy maintsy miara-miasa aminao ny fianakavianao amin'ny fanomezana fahatokisana sy fifandanjana. Mamita ny mari-pahaizana Master amin'ny teny Guaraní aho ankehitriny, anisan'ny kilasy voalohany nahazo diplaoma aho, ary 30 izahay no mpiara-mianatra, anisan'izany ireo poeta, mpanao gazety sy profesora.
GV: Iza no tena mamaky betsaka ny bilaoginao, ny Paragoaiana sa ny vahiny?
MM: Ireo izay mamaky ny blaogiko dia avy any amin'ny firenena vahiny, mpianatra any amin'ny oniversite avy any Japon, Etazonia, Kiel sy Mainz (Alemaina) ary any Kanada. Ary ao koa ireo Paragoayana monina any Espaina, Brezila sy Paragoay, ireo olona izay mankafy ny fiteny sy ny mpianatra Guaraní. Ary koa ireo olona izay gaga nahita ny bilaogy, fa zava-baovao izany. Tsy nisy olona nieritreritra fa azo atao izany.
GV: Mihevitra ve ianao fa hitombo ny isan'ny bilaogy amin'ny teny Guarani?
MM: Mino aho fa hitombo izy ireo, maro ireo olona izay manoratra tsara ary misy ireo mpanao gazety tena mahay izay nianatra Guaraní ary afaka manoratra bilaogy, saingy hatramin'izao, tsy afaka manao izany ry zareo, toa izaho ihany no hany tsy matahotra ny hanao hadisoana.
Resaka fananana herimpo hanao izany fotsiny no ilaina. Hahafaly izany satria sehatra nomena ny fiteny iray izay mbola maro no mahatsiaro ho menatra amin'ny fananana na fitenenana azy. Ary tsy takatr'izy ireo ny lanjan'ny fanehoan-kevitra izay miseho avy amin'ny teny mitovy mamaritra ny teko (ny maha-izy) ny olombelona.